Infochimps: Nnukwu ndị ọkachamara na nyiwe data gị | Martech Zone
Infochimps: Ọkachamara ndị ọkachamara na nyiwe gị
Dị ka ụlọ ọrụ, ndị ahịa anyị na-arịọ anyị ka anyị kọwaa ọtụtụ data nke a na-enye ha site na igwe akụkọ ha - CRM, Email, Social Media, wdg. Ka ọ dị ugbu a, anyị abanyela data a n'ime data. echekwa na sava anyị dị n'ime ya, were tahịa ya wee ziga ozi anyị chọrọ.
Otú ọ dị, data ahụ na-esiwanye ike nzacha, nkewa na ekenye. Mgbasa mgbasa ozi, dịka ọmụmaatụ, na-enye ụdọ na URLs nke ozi a ga-enyocha ka o wee nwee ike ịkpado ya nke ọma, kewaa ma kọọrọ ya. Na windo nke oge a gwara anyị ka anyị gbutuo site na data a na-adịwanye obere. Olu data na - ebuwanye ibu - ma sie ike ijikwa. Ndị ahịa anyị chọrọ azịza… ugbu a.
Tinye ngwọta data dị ka Infochimps. Infochimps malitere azụmaahịa ha na-elekwasị anya nke ijikwa ọtụtụ puku datasets na nrọ nke ịghọ 'wikipedia' nke data. Agbanyeghị, ka oge na-aga, ha chọpụtara na uru na nka ha nyere bụ iwulite akụrụngwa na ọrụ nwere ike ijikwa data buru ibu.
Ma ị bido ọhụụ na-etolite na uto ma bụrụ onye e liri na data, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ chọrọ enyemaka iji dozie ihe ga-enyere aka wepu, jikwaa ma gosipụta data bara uru, Infochimps nwere ike inye aka. Enwekwu uru na ikpo okwu dị ka ọrụ? Ha nwere ihe ndekọ data karịrị 15,000, ma bụrụ otu n'ime ole na ole Ọnụ ndị mmekọ na-enye oku nke data mgbasa ozi mmekọrịta.
Ntinye aka na Infochimps bụ ngwakọta nke ọrụ ụlọ iji wuo akụrụngwa jikọtara ya na onye ọrụ ịnweta na ịmepụta ngwaọrụ. Infochimps pụrụ iche n’etiti nnukwu data nyiwe n’ihi ngbanwe ha nha nha.
Infochimps Platform Isi:
Ngwakọta Akụrụngwa - Igwe ndị na-apụ apụ nke na-enye ike nchịkọta data na njikọta, ezigbo oge nchịkọta, nnukwu-ogbe ogbe nchịkọta, na nchekwa data.
Ọrụ nnyefe data ™ - DDS jikọtara nke ọma na gburugburu ebe ị nọ, na-enye ike ETL (wepụ-mgbanwe-ibu) nke nwere ike ịbawanye ụba, ma na-enyere ezigbo oge, nyocha data nyocha.
Njikwa data - Ma ọ bụ HBase, Cassandra, Elasticsearch, MongoDB, MySQL, ma ọ bụ ndị ọzọ, anyị na-ahụ na nchekwa data dị mma maka ọrụ ahụ dị na aka gị.
Igwe ojii Hadoop - Mee nyocha nke nnukwu ogbe dịka ịchọrọ ya, ma ọ bụrụ na ad-hoc Hadoop ụyọkọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Nweta akụrụngwa niile ịchọrọ, jiri nlele na ntanetị.
Layer Ngwa - Ihu ihu nke ime ka Big Data nwekwuo ike inweta, gunyere nke oma nchịkọta ngwá ọrụ edemede, eserese eserese, yana API dị ike.
Wukong - na-enye a dị mfe nchịkọta ahụmahụ edemede. Dee nke gi nchịkọta na Onye Mmepụta-enyi na enyi Ruby, na-agba ọsọ koodu na mpaghara maka mmepe mmepe ngwa ngwa, na leverage dị nchịkọta ederede.
Dashpot ™ - Mepụta ezigbo oge visualizations si gụgharia data, nweta miri visibiliti gị Platform usoro, na ngwa ngwa na-amalite na-akwụsị nkeji nkeji gị data ụyọkọ.
Platform API - Site na API dị n'otu, njikwa ikpo okwu na visibiliti nke data dị n'ime ya bụ naanị arịrịọ weebụ ole na ole. Ugbu a na beta.
Otu ihe atụ: Otu nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi ewuwo usoro mgbasa ozi na-ege ntị nke na-achịkọta 18 ma ọ bụ iyi iyi nke data mgbasa ozi. A na-agbakwunye iyi ahụ site na ozi gbasara nwoke na nwanyị, chịkọtara na nchịkọta ozi, wepụta ya na ndị na-agụ akwụkwọ, nwee mmetụta e tinyere, ma na-ewepụta ọkwa ebe achọrọ. Ebumnuche nke usoro a bụ iji nye ndị ahịa ezigbo akụkọ oge. Ndị ahịa ndị ọzọ gụnyere Cisco, BlackLocus, Runa, Whaleshark Media, na Blue Cava.
Hazie oge ngosi na Infochimps ma ọ bụ email info@infochimps.com n'ihi na ihe Ama.
Tags: APInnukwu dataigwe ojii hadoopdashpotọrụ nnyefe datadata managementhadoopinfochimpswukong
App Press: The Mobile App Designer maka ndị na-ese ihe
Feb 7, 2013 n’elekere 8:51 nke abali
Ọ bụrụ na anaghị m arụ ọrụ, infochimp bụ ụdị ọrụ nwere ike ige ntị na ihe ndị mmadụ chọrọ dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana ndị ahịa nwere ike ịhazi ihe dịka ya ọ bụ? M ga-enwe mmasị maka ebe nrụọrụ weebụ m.
Feb 7, 2013 na 4:55 PM
Nke ahụ bụ otu n'ime data data ha nwere ike ịnye ma ị nwere ike ịmepụta ọrụ nlekota oru na nke ahụ. Agbanyeghị, nke ahụ abụghị ọrụ ha bụ isi.